01/10/2018 - Page 2 sur 4 -
Vondrona Eoropeanina – fifidianana : Efa eto Madagasikara ireo mpanara-maso
Efa tonga eto Madagasikara ireo mpanara-maso ny vondrona eoropeanina amin’ izao fotoana izao, ary hiparitaka manerana an’i Madagasikara izy ireo manomboka rahampitso. Omaly no nifampitafa tamin’ ny mpanao gazety, ireo mpanara-maso miisa 40, tarihin’i Christian …Tohiny
Ambalavao Antsirabe : Nipoaka ny fitehirizana menaka mavesatra
Kila forehitra ary tsy nisy azo noraisina intsony, ilay fanatobiana menaka mavesatra ny harivan’ny sabotsy 29 septambra lasa teo, tao Antsirabe. Raha ny fantatra dia noho ny fiakaran’ny hafanana be loatra tamin’io fitaovana io no …Tohiny
Festival Tamaga Midôla : Ekipa 10 mifaninana eo amin’ny beach soccer
Nanomboka omaly, teo amin’ny Bord-n’i Toamasina, ny “Festival Tamaga Midôla”. Fifaninanana ara-panatanjahantena eo amin’ny taranja beach soccer, beach rugby sy beach handball, ary beach volley. Maresaka, araka izany, ny renivohitr’i Betsimisaraka amin’ity hetsika ara-panatanjahantena tanterahina …Tohiny
Toastmasters club : Fifehezana ny teny anglisy
Efa tafajoro eny amin’ny American Center Tanjombato ny “club toastmasters” eto Madagasikara, izay antsoina hoe, “The first toastmasters club of Madagascar”. Sehatra iray hifehezana ny teny anglisy amin’ny serasera sy ny fahaiza-mitaria, amin’ny fandraisam-pitenenana eny …Tohiny